albinism – The Ulwazi Programme
Yekani ukubulala abantu abane-Albinism!
Imibiko yamaphephandaba ithi cishe sebengamakhulu amabili abantu abane-Albinism asebebulewe ngesihluku kufunwa inyama nezitho zabo zomzimba kuleminyaka eyishumi eyedlule emazweni aseningizimu yezwekazi i-Africa. Ngeshwa kunabantu abasonomkhuba omubi, onyanyisayo, onyantulisa igazi. Ngikhuluma ngamanyala okubulala abantu abane-Albinism ngenxa yokukholelwa ukuthi inyama yabo inenhlanhla. Abanye baphinde bakholelwe ukuthi bangalapheka esifweni sengculaza uma belala ngokocansi nomuntu one-Albinism. Sekukaningana kuqinisekiswa ukuthi … Read more
Categories News Tags albinism, albinos, ukubulala